DOWLADDA CANADA OO KA FARXISAY QOYSKA WIIL SOOMAALIYEED… – hareerley News
Dowladda Canada ayaa oggolaatay in aysan dib u celin Muwaaddin Soomaali ah oo isaga oo da’ yar galay dalka Canada hayeeshee aan waligii helin deganaansho rasmi ah.
Cabdullahi Cilmi oo 34 jir ah ayey dowladda Canada qorsheysay in Isniinta soo socota dib loogu celiyo Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada hoose.
Hayeeshee codsi shalay oo Jimco ahayd ay Qaramada Midoobey u gudbisay Dowladda Canada ayaa waxaa ay uga codsatay in aan dib loo celin muwaaddinkaas.
Dowladda Canada ayaa Cabdullahi Cilmi ku eedeeysay in uu dambiyo ay ka midyihiin weerar ka geystay gudaha dalka Canada.
Qareenka u doodayay Cabdullahi oo lagu magacaabo Idowu Ohioze, ayaa waxaa uu helay E-mail sheegaya in la joojiyay dib u celinta Cabdullahi Dowladda Canada aqbashay,kaas oo warbaahinta gudaha dalka Canada la wadaagay warka cusub.
Qareenka ayaa intaas ku daray in arrintan ay tahay guul horudhac ah laakiina aysan ahayn shaqo dhamaatay,waxaana uu xusay in go’aankan uu KMG yahay islamarkaana howsho ay wali sii soconeyso.
R/W Xasan Cali Khayre oo Guddoomiyay Shir looga Hadlay Dardar-gelinta Qorshaha Deyn Cafinta:-(Sawiro)
Posted on August 5, 2019 August 5, 2019 Author Hareerley News
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta guddoomiyay shirka todobaadlaha ah ee looga hadlo dar-dargelinta qorshaha barnaamijka deyn cafinta dalka. Shirka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru-dowladaha wasaaradda maaliyada, agaasimaha guud iyo agaasime waaxeedyada wasaaradda iyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka, xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Siraaji. […]
Madaxweyne Mxamed Cabdullahi Farmaajo oo gaaray New York
Posted on September 23, 2019 September 23, 2019 Author Hareerley News
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka qeyb galaya Meertada 74-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa goor dhaw gaaray magaalada New York ee dalka Mareykanka, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay Danjiraha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Abuukar Balle. Madaxweynaha ayaa kalmad ka jeedin doona madashan kulminaysa Hoggaamiyayaasha Caalamka, […]
Midowga Afrika oo Somaliya ku cadaadinaya in kiiska badda lagu dhameeyo Adis ababa….